आज एकै दिन थप १६ जनाको कोरोनाबाट ज्यान गयो ! देशभर कोरानाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२७ पुग्यो – Complete Nepali News Portal
आज एकै दिन थप १६ जनाको कोरोनाबाट ज्यान गयो ! देशभर कोरानाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२७ पुग्यो
काठमाडौँ । नेपालमा आज एकै दिन थप १६ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । यो सहित देशभर कोरानाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२७ पुगेको आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
डा गौतमका अनुसार नेपालमा आज १ हजार ५ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । यो सहित कोरोनालाई जित्नेको संख्या ४७२३८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।